Muri pano: musha / Technology News / famba / Google's Pixel Call Screen inoratidzira kubuda muUK
Google nguva pfupi yadarika yakazivisa zvitsva zvemberi zvekufona zveGoogle Pixel 6 uye Pixel 6 Pro zvishandiso muUS zvakagadzirirwa kubata zvirinani nevanofona spam uye kufona mabhizinesi.
Kugamuchira mafoni kubva kunhamba dzisingazivikanwe kunodhonza. Kana iwe ukawana runhare kubva kunhamba isingazivikanwe, Google's Call Screen inokubatsira kuti uone kuti ndivanaani uye nei vari kufona usati watora. Mamodheru avo ezvino-e-pa-device anoita kuti zvinyorwa zvive zvakanyatsojeka kupfuura nakare kose paPixel 6 nePixel 6 Pro tichitenda kuGoogle Tensor itsva yePixel.
Call Screen inobatsira vashandisi muUS, Canada neJapan skrini 37 miriyoni mafoni mwedzi wega wega, uye Google iri kuwedzera bhuku reCall Screen kuvashandisi vePixel muUK, France, Germany, Australia, Ireland, Italy neSpain.
Vashandisi vePixel muUK vava kuzivisa kuti chimiro chiri kutenderera kune ma handsets ipapo, pamwe neshanduro 71.0.40468116 yefoni app.
Kuti uone kana uine chimiro:
Vhura iyo Google Foni application
Tinya madotsi matatu pakona yekurudyi uye sarudza iyo Settings
Ona kana iwe uine iyo Call Screen sarudzo pasi pechikamu che "Assistive".
Nechero rombo rakanaka, hauzombofa wataura kune chero munhu uchishandisa foni yako zvachose.
Iyo Pixel 6 uye 6 Pro shanduro dzakaburitsa… futi zvakare